किन बढिरहेको छ गैंडाको मृत्यु संख्या ? – Bikash Khabar
किन बढिरहेको छ गैंडाको मृत्यु संख्या ?
शुक्रबार, ३० आश्विन २०७७ गते १७:१३ मा प्रकाशित	Author विकास खबर	Comment(0)	370 Views
नवलपुर । गैंडा गणना २०१५ अनुसार हाल नेपालमा ६४५ ओटा एक सिङ्गे गैंडा छन् । प्राचीन समयमा नेपाल, भरत, चीन, पाकिस्तान र बर्माका केही भागमा गैंडा पाइने गरेको भए पनि अहिले नेपाल र भारतमा मात्रै एक सिङ्गे गैंडा अस्तित्वमा रहेका छन् ।
विसं २००७ सम्म ८५० भन्दाबढी संख्यामा रहेको एक सिङ्गे गैंडा चोरी शिकारीको निशानामा पर्ने गरेको छ । गैंडाको खाग र खुर विश्व बजारमा अवैध रुपमा महङ्गो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले पनि यसको चोरी शिकारी हुने गरेको हो । गैंडाको खागले यौनवद्र्धक औषधिको काम गर्ने अन्धविश्वासका कारण चीनमा यसको गैरकानुनी रुपमा बिक्री हुँदै आएको बताउने गरिन्छ ।
नेपालबाट मारिएका गैंडाको खाग चीनमा लगेर बिक्री गर्ने गरिएको संरक्षणकर्मी बताउँछन् । विसं २००७ अघिसमम ८५० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका गैंडा २०१३ तिर १०० को संख्यामा झरेको थियो । विसं २०१४ मा ४००, त्यसको दुई वर्ष पछाडि ३०० गैंडा मात्रै जीवित रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भनाइ छ ।
चोरी शिकारीका कारण नेपालमा गैंडा मार्ने क्रम नरोकिएपछि २०१९ सालमा गैंडा संरक्षणको लागि अवधारणा तयार पारेर राप्ती नदीको दक्षिणी भागमा महेन्द्र मृगकुञ्ज बनाएर गैंडा संरक्षणको लागि पहल भएको पाइन्छ ।
मृगकुञ्ज स्थापनासँगै चितवनका गैंडा जोगाउनको लागि अवकासप्राप्त सैनिकद्वारा २०२३ सालदेखि गैंडा गस्ती शुरु गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजङ्ग कुँवरले बताए । गैंडा गस्ती शुरु भएपछि २०२५ सालमा गैंडाको संख्या केही बढेर १०८ पुगेको उनको भनाइ छ । गैंडा संरक्षणको काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेकोले यसको संरक्षणमा निकुञ्ज र सेनाका साथै समुदायको पनि ठूलो भूमिका रहेको कुँवरले बताए ।
गैंडालगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन बन्यो । ऐन आउनुभन्दा १५ वर्ष अगाडि नै मस्यौदा बनेको भएपनि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन आउने बेलासम्म गैंडाको बासस्थानको पहिचान समेत गरिसकिएको थियो ।
लोपोन्मुख प्रजातिका वन्यजन्तुहरुको संरक्षण गर्न भन्दै चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लाका केही भाग समेट्दै स्थापना गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल अहिले ९५२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । शुरुआती अवस्थामा चार जिल्लाको ५४४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर निकुञ्ज स्थापना गरिँदा चितवनमा १४७ ओटा गैंडा थिए । अवकास प्राप्त सेनाले गस्ती गरेपछि निकुञ्जमा गैंडाको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको पाइन्छ ।
अवकास प्राप्त सैनिकबाट मात्रै गैंडाको सुरक्षा सम्भव नभएपछि निकुञ्ज स्थापनाको दुई वर्ष पछाडि नै २०३२ सालबाट नेपाली सेनालाई गैंडा संरक्षणको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिचालन गरियो । निकुञ्ज स्थापनाको पाँच वर्षपछि २०३५ सालमा नै यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै ९३२ वर्ग किलोमिटर पुर्याइएको थियो । निकुञ्जको क्षेत्र विस्तारसँगै २०५३ सालमा आएर मध्यवर्ती क्षेत्र समेत घोषणा गरियो ।
चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि निकुञ्ज एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने र यसका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बरालले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरी रहेका चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्साको ७५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई दिने व्यवस्था गरियो ।
यससँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । गैँडा संरक्षणको लागि चुनौती पहिचान गरी नियमित गस्तीको काम शुरु गरेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चार पटकसम्म शून्य चोरी शिकारी नियन्त्रण वर्ष मनाउन सफल भएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा संरक्षणको लागि नेपाली सेनाले स्वीपिङ अप्रेसन, दैनिक पेट्रोलिङ, वासस्थान व्यवस्थापन, अप्रेशन महाहन्ट जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको रामको भनाइ छ । निकुञ्जले सन् २०११ मा पहिलो पटक शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१३ मा शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाएको निकुञ्जले लगातार २०१५ र १६ मा समेत शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाउन सफल भएको रामले बताए । शून्य चोरी शिकारीमा निकुञ्ज, सेना र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको रामको भनाइ छ । सेनाले निकुञ्जको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि उनीहरुको आँखा छलेर शिकारीले गैँडा मार्दै आएका छन् ।
लगातार तेस्रो पटक शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाउने तयारीमा रहेको निकुञ्जमा मुख्यालय कसरा नजिकै २०७३ चैत २५ गते राति गैंडा मारेपछि सुरक्षा चुनौती थपियो । विसं २०७४ को वैशाख २० गते निकुञ्जले लगातार तेस्रो र समग्रमा पाचौँ पटक शून्य चोरी शिकारी नियन्त्रण मनाउने तयारी गरिरहँदा जगतपुरमा गैंडा मारिएको थियो ।
त्यसपश्चात निकुञ्जमा बढाइएको सुरक्षा सावधानीका कारण केही वर्ष निकुञ्जमा चोरी शिकारीका कारण गैंडाको मृत्यु भएको थिएन । करिब साढे तीन वर्ष पछि पुनःगत भदौ २१ गते चोरी शिकारीका कारण एउटा गैंडा को मृत्यु भएको छ । यद्यपि उक्त गैंडाको खाग र खुर भने सुरक्षित रहेको सहायक संरक्षण अधिकृत रामले जानकारी दिए ।
संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै शिकारीले निकुञ्जका गैंडा हरु आफ्नो पासोमा पार्ने गरेका निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले बताए । विशेष गरी सेनाको गण परिवर्तन हुने समयमा निकुञ्जमा चोरी शिकारी बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । हालको सामान्य अवस्थामा बाहेक द्वन्द्वकालमा निकुञ्जका धेरै गैंडा चोरी शिकारीका कारण मरेका उनले बताए ।
निकुञ्जमा सेनाले सुरक्षा दिएपछि बढ्दै गएको गैंडाको संख्या नेपालभर २०५७ सालमा ६१२ पुग्यो । त्यसपछिको केही समय मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा गैंडासमेत परेको देखिन्छ । विसं २०५९ मा गैंडाको संख्या घटेर ५४४ पुगेको थियो ।
लगत्तै २०६२ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको संख्या ३७२ मा झरेको देखिन्छ । त्यो समयमा नेपालभर ४०९ वटा मात्रै गैंडा रहेका थिए । नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएपछि भने गैंडाको संरक्षण समेत विस्तारै बढ्दै गएको बरालले बताए ।
सन् २०१५ को राष्ट्रिय गैंडा गणनाअनुसार चितवनमा ६०५ तथा नेपाल भर ६४५ वटा गैंडा पाइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको सेनाको पोस्ट द्वन्द्वकालमा सात ओटामा खुम्चिएको थियो भने अहिले ५६ ठाउँमा पोस्ट स्थापना गरिएको छ ।
विसं २०५२ देखि २०७३ सालसम्म निकुञ्जको गैंडा मुद्दामा फरार रहेका विभिन्न अभियुक्तहरु पक्राउ गर्न सुरक्षाका सबै संयन्त्रसँग सहकार्य गरिएको छ । निकुञ्जले हालसम्म १५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई गैंडा मुद्दामा कारवाही गरिसकेको छ ।
त्यस्तै गैंडा मारेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न एक सयभन्दा बढी व्यक्तिको खोजी कार्य जारी राखेको छ । गैंडा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका गैंडा विभिन्न समयमा बर्दिया र शुक्लाफाँटामा समेत स्थानान्तरण गरिदै आएको छ । सन् २००० देखि चितवनका गैंडा बर्दिया र कञ्चनपुर लैजान लागिएकोमा सन् २०१७ सम्म १०० गैंडा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ । स्थानान्तरण गरिएकामध्ये अहिले ४० वटा गैंडा मात्रै ज्यूँदा रहेका छन् । नेपालबाट दुई वटा गैंडा उपहारस्वरुप चीनलाई प्रदान गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनः विषयकेन्द्रित मुद्दामा बहस गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गरेका
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले अनशनरत डा.गोविन्द केसीको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका
कोरोनाका बिरामी बढ्दै जाँदा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जनशक्ति अभाव